Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukhenketho lokuzonwabisa » Ungasinda njani ekuhlaselweni sisilwanyana sasendle?
Ukhenketho lokuzonwabisa • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukwaphula iindaba zase-US • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Zininzi izinto onokuzenza ukuthintela uhlaselo lwesilwanyana kodwa ukwazi ukuba ukuhlala uzolile okanye ukulwa kungundoqo! ”
I-United States yindawo eyingozi xa kuziwa kuhlaselo olubulalayo ebantwini zizilwanyana zasendle. Kule minyaka ingama-20 idlulileyo, abantu abangama-520 babulawa eTexas, elona lizwe liyingozi kakhulu e-US xa kuziwa kwizilwanyana ezibulalayo.
Iqela Ukuphuma kutyhilwe Amazwe athi abenolona hlaselo lubulala izilwanyana ukusukela ngo-1999 ukuya ku-2019, kunye ne izilwanyana ezinayo kubangele ukufa kakhulu kwaye wabonelela ngeengcebiso zeengcali ukuba wenzeni xa uhlaselwa sisilwanyana esiyingozi.
Zilungiselele uluhlu lwezinto onokuzenza xa uhlaselwa ukuze uhambe usaphila.
Amazwe alishumi abulala abantu baseMelika xa kusiziwa ekuhlaselweni sisilwanyana sasendle
I-Texas kunye nokufa kwabantu abangama-520
North Carolina i-180
ENew York 124
Amazwe alishumi akhuselekileyo aseMelika xa kusiziwa ekuhlaselweni sisilwanyana
EMantla Dakota: 0
IRhode Island: 0
ENew Hampshire: 10
Ukuza ebuhleni: 17
EMzantsi Dakota: 22
Izilwanyana ezibulala abantu baseMelika abahamba nge-wirld zezi
Ibrown Bear 70
Ibhere emnyama: 54
I-Polar Bear: 10
UCarl Borg ngumhleli we-Outforia kwaye ungumhloli okhutheleyo ngexesha lakhe lokuzimela. Unengcebiso kwiingcali malunga nokuba enze ntoni xa ehlaselwa sisilwanyana esiyingozi.
“Ukuhlaselwa sisilwanyana yinto eyoyikisayo kodwa eyoyikisayo xa usiya kwiindawo ezijikeleze uMntla Melika, ke ngoko besifuna ukuqiniseka ukuba uyazazi iindlela zokuzikhusela xa uziva usoyikiswa sesinye sezilwanyana eziyingozi.
Ingcebiso yam ephambili kuye nakubani na oya kwezi ndawo kwiindawo onokuthi uhlangane nesilwanyana sasendle kufuneka uzilungiselele. Ndingahlala ndicebisa ukuba uphande ngezona zilwanyana zibalaseleyo kwindawo otyelele kuyo, njengoko izilwanyana ezahlukeneyo zithetha iiprotocol ezahlukeneyo xa zijamelene nohlaselo. Ukwazi umahluko phakathi kwebhere emdaka kunye emnyama umzekelo kungasindisa ubomi bakho! Xa uziva usoyikiswa libhere elimnyama, kuya kufuneka uzenze mkhulu kangangoko kunokwenzeka, phakamisa iingalo zakho ngaphezulu kwentloko yakho kwaye wenze ingxolo enkulu. Ngelixa ibhere emdaka kufuneka uhlale uzolile kwaye ufikelele kwi-spray spray.
Ngezilwanyana zasemanzini ezinje ngookrebe kufuneka uhlale ukunqanda ukuqubha okungalunganga njengoko oku kunokuba nomtsalane kubo, nangona kunjalo, ukuba baqala ukuhlasela kuwe - sebenzisa into njengesixhobo, okanye amanqindi kunye neenyawo zakho - zijolise emehlweni abo kunye neigill.
Kwii-Alligators kwahlukile, kusoloko kungcono ukunqanda imilambo enamanzi, ukuba uyahlaselwa, zilwe kwangoko kodwa ungavumi ukuqengqeleka kuba oko kunokubangela ukuba wophule ithambo.
Iibhere ziyingozi eqhelekileyo kwiindlela ezininzi zokunyuka intaba eMntla Melika, kwaye iintlobo nganye kufuneka kujongwane nazo ngendlela eyahlukileyo. Kwezi ntlobo zintathu zeebhere zikhona eMntla Melika, uya kubaleka kuphela ubhere omnyama okanye ibhere emdaka, njengoko iibhere ezimhlophe zifumaneka kumantla eArctic Circle.
Ukuba udibana nebhere emnyama, ke unethuba elincomekayo lokuphepha ukwenzakala okanye ukufa. Iibhere ezimnyama zincinci kuneebhere ezimdaka kwaye, ngaphandle kwegama labo, zinemibala eyahlukeneyo. Ukuba udibana nenye, kuya kufuneka uzenze mkhulu kangangoko kunokwenzeka, phakamisa iingalo zakho ngaphezulu kwentloko yakho kwaye wenze ingxolo eninzi. Abahlobo bakho abahambahambayo kufuneka benze kwa into enye ngelixa bema ngokwabo kufutshane nawe kangangoko. Oku kuyakubonisa into eyoyikisayo kwibhere kwaye ngethemba lokuba kuya kubangela ukuba kukushiye wedwa. Nangona kunjalo, oku ayisiyiqhinga elinobudenge, kwaye kuya kufuneka usoloko uphethe isitshizi sebhere kunye nawe kwindawo ekulula ukufikelela kuyo xa ungena kwilizwe leebhere, kwaye iimpondo zomoya zinokuba luncedo ngokukodwa ekoyikiseni iibhere ezimnyama kude.
Ukuba kwenzeka kwibhere emdaka, kuya kufuneka uziphathe ngokwahlukileyo. Kuya kufuneka ucothe kancinci kwaye ngokuzolileyo ukufikelela kwibhere yokutshiza ngelixa uhlala uzolile ngangokunokwenzeka. Nje ukuba uthintele ukulungele ukusebenzisa, qalisa ukuhamba kude nebhere ngendlela ecothayo nelawulwayo, wenze yonke imizamo yokungothusi isilwanyana, ngelixa uthetha ngelizwi elizolileyo nelizolisayo. Ukuba ibhere emdaka iqala ukuza kuwe, jolisa ibhere yokutshiza ngaphezulu kwentloko yesilwanyana kwaye uyinike idosi yokutshiza ixesha elide.
Nantsi eminye imiyalelo yendlela onokulwa ngayo xa uhlaselwa sisilwanyana esiyingozi
Njengalo naluphi na uhlaselo lwesilwanyana, kuhlala kulungile ukuzama ukunqanda ukudibana nookrebe ukuba kunokwenzeka. Oku kunokuba nzima njengoko kunzima ukubona ukubhukuda phantsi kwamanzi. Nangona kunjalo, ukuba umntu ubonile, kuya kufuneka wenze indlela yakho ngokuzola kangangoko elunxwemeni. Kunqande ukuqubha okungaqhelekanga kunye nokutshiza, kuba lo msebenzi uza kutsala umdla wookrebe.
Ukuba uhlaselwa ngukrebe, kuyacetyiswa ukuba uyihlasele ngamandla akhoyo, usebenzisa nantoni na onokuyisebenzisa njengesixhobo, okanye usebenzisa amanqindi kunye neenyawo ukuba kukho imfuneko. Kuya kufuneka ujolise amehlo abo kunye neigill, njengoko zombini ezi ndawo zinobuthathaka kukrebe. Impumlo kashark kuye kwathiwa yindawo ebuthathaka enokubathintela ekuhlaselweni ngakumbi.
Ukuba uyalunywa, okanye uve nje into idada emlenzeni wakho, kuya kufuneka uphume emanzini ngokukhawuleza nangokuzolileyo kangangoko kwaye usebenzise uxinzelelo nakweyiphi na indawo ekopha. Kuya kufuneka ke ubize iinkonzo zongxamiseko kwaye uzifumanele uncedo lwezonyango ngokukhawuleza.
Kunganzima ukubona iinyoka, kuba zihlala zizimela kwingca ende, ngaphantsi, okanye kwimingxunya emincinci kunye neendawo ezigqunyiweyo. Unokudibana neenyoka ngelixa uhamba emanzini, oko kunokuthetha ukuba awuziqondi ukuba ulunywe de kube lixesha. Kule meko, kuya kufuneka usoloko ujonga nakuphi na ukukrwela ukuze uqiniseke ukuba ayizinyoka ngokwenene.
Ukulunywa yinyoka kuyabonakala ngeempawu zokuhlatywa ezibekwe kwilonda. Eminye imiqondiso ibandakanya ukuba bomvu nokudumba ujikeleze ukugqabhuka, iintlungu eziqatha, isicaphucaphu nokugabha, umbono ophazamisayo, ubunzima bokuphefumla, ukuba ndindisholo okanye ukurhawuzelela imilenze yakho, kunye nokwanda kwe-salivation nokubila.
Ukuba uye walunywa, zama ukuhlala uzolile kwaye ukhumbule umbala nokumila kwenyoka ukuba kunokwenzeka, kuba oku kuyakunceda ekuboneni uhlobo kunye nonyango olufanelekileyo ngokukhawuleza. Kananjalo, ukuzola ngakumbi nangakumbi xa ixhoba lokuluma lihleli, kuya kuthatha ixesha elide ukuba isifo sinwenwe emzimbeni. Kuya kufuneka ubize iinkonzo zongxamiseko ngokukhawuleza, kwaye ixhoba lokuluma lihlale okanye lilale phantsi ngelixa ligcina ukuluma ngezantsi kwenqanaba lentliziyo. Ukuluma kufuneka kucocwe ngamanzi ashushu anesepha ngokukhawuleza kwaye kugqunywe ngento eyomileyo necocekileyo.
Ungazami ukufunxa ityhefu. Oku kunokwenza izinto zibe mbi ngakumbi kunye nokutyhefa umntu wesibini. Isilonda kufuneka sishiywe sodwa ngaphandle kwempahla elula yokunxiba enxitywe ngaphezulu. Akufunekanga utye nabuphi na utywala okanye ikofu, kwaye uxhathise umnqweno wokufaka ipakethe yomkhenkce enxebeni.
Ukuhlaselwa kwe-Alligator ebantwini kunqabile, uya kukuvuyela ukwazi. Eyona ndlela yokuthintela iigarigator kukuhlala kude nemilambo kunye neendawo ezinamanzi apho zihlala khona. Ukuba uhlaselwe emanzini, iarigator inokuzama ukukuluma kwaye emva koko iqengqe emanzini. Akufanele uzame ukumelana nokuqengqeleka, kuba oku kunokubangela ukuba wophule ithambo, okanye umqolo wakho, ukushiye kwinceba yegator.
Nangona kunjalo, kuya kufuneka ubeke umlo kangangoko unakho. Njengabantu abangazizisulu zexhoba le-alligator, baya kuhlala bekhulula abantu abenza izinto zibe nzima kakhulu kubo. Kuya kufuneka ujolise amehlo abo kunye nomphunga wabo ukuba kunokwenzeka, kodwa kuthintele ukuzama ukufumana umvuzo ukuvula imilomo yabo njengoko amandla abo okuluma enamandla amakhulu kwaye iya kuba ngumzamo wokuchitha. Kuya kufuneka ungaze udlale ufile, kuba abayi kuba nesizathu sokukuyeka uhambe.
Ukuba udibana nengwenya emhlabeni, kuya kufuneka uzame ukubaleka ukuba kunokwenzeka. Ngelixa iiarigator zinokukhawuleza ngokukhawuleza kumgama omfutshane, azinakho ukuqhubeka nesantya. Ke, ukubheja kwakho okuhle kukubeka umgama phakathi kwakho kunye negator ngokunokwenzeka.
Ukuba uhlangabezana necougar, kuya kufuneka wenze ngendlela efanayo ngokungathi uhlangane nebhere emnyama. Zenze ubonakale ubankulu ngangokunokwenzeka kwaye wenze ingxolo ephezulu ngokukhwaza okanye ukubetha amakhwelo okanye isigodlo somoya. Kuya kufuneka ujongane ne-cougar, ungaguquli umva kuyo, kodwa thintela ukuqhagamshela ngamehlo ngqo njengoko oku kunokutolikwa njengokuziphatha gwenxa kwaye kunokubangela i-cougar ihlasele.
Akufanele uzame ukubaleka kwi-cougar, njengoko iya kubangela isilwanyana esilumkileyo sokugxotha ixhoba. Iicougars nazo zizidalwa ezikhawulezayo, ngenxa yoko naziphi na iinzame zokubaleka ngaphandle ziya kuba lilize. Endaweni yoko, ukuba i-cougar izama ukukuhlasela, kuya kufuneka ulwe nayo nangayiphi na indlela. Betha i-cougar ngayo nayiphi na into ekufuneka uyenzile, okanye usebenzise amanqindi ukuba kufuneka, njengoko iisougars zazi ukuba zithintelwe ubundlongondlongo. Unokusebenzisa ispreyi sokutshiza okanye uthwale isitshizi ukuze ugxothe ikougar enoburharha.
Ukuhlaselwa kweWolf ebantwini yinto enqabileyo, kwaye ihlala yenzekile xa ingcuka inogonyamelo okanye ukuba isiqhele ukuhlala ebantwini. Ngaphandle koko, zihlala zenzeka xa ingcuka ihlasela inja, ebonwa njengesongelo somhlaba, kwaye umnini uzama ukungenelela.
Ukuba uthe wadibana nengcuka, kuya kufuneka uzenze ubonakale umde kwaye umkhulu, uhlehla kancinci ngelixa ugcina ulwalamano ngamehlo. Musa ukufulathela ingcuka okanye ubaleke kuyo, kuba oku kuya kubangela ukuba isilwanyana sithande ukusukela. Ukuba unenja xa udibana nengcuka, zisa isilwanyana sakho esithendeni kwaye uzibeke phakathi kwezi zilwanyana zimbini. Oku kufuneka kuphelise ukudibana.
Ukuba ingcuka ayibuyeli umva kwaye ibonisa iimpawu zobundlongondlongo, ezinjengokukhonkotha, ukungxola, ukubamba umsila phezulu, okanye ukuphakamisa amaqhekeza, kuya kufuneka wenze ingxolo kangangoko kunokwenzeka kwaye uziphose kuyo. Oku ngethemba lokuthintela ingcuka ukuba isondele kakhulu. Nangona kunjalo, ukuba iyakuhlasela, kuya kufuneka uphinde uzilwele ukuze ukuhlasele kungabonakali kufanelekile.
Nangona kunjalo, kungcono ukuzama ukunqanda le meko kwasekuqaleni. Uhlaselo oluninzi lwezilwanyana lushiya igumbi elincinci lokuphila ngaphandle kokuba nethemba lokuba isilwanyana asinomdla. Ukuba uphume emahlathini, ukude nempucuko okanye iinkonzo zongxamiseko, kuncinci kakhulu okunokwenziwa ukuba uyalunywa, ulunywa, okanye wenzakele ngenye indlela sisilwanyana sasendle esinoburhalarhume.
Ke ngoko, kubaluleke kakhulu ukuba ulandele iingcebiso zeengcali zezilwanyana zasendle okanye abaphathi bepaki ukuqinisekisa ukuba ukhuselekile kwizilwanyana zommandla. Iingcebiso ngokubanzi kumhloli wamandla kukuhamba ngokwamaqela, ukuze ungachongwa njengeyona nto kujoliswe kuyo ngokulula, kwaye ugcine umkhondo ngalo lonke ixesha. Oku kubalulekile kungekuphela nje ukukhusela ubomi bakho, kodwa kunye nokukhusela indawo yokuhlala yendalo ngokubaphazamisa kancinci kangangoko.
Kuya kufuneka uqaphele ukuba ukuthatha abantwana kwiindawo ezaziwayo ngokuba nezilwanyana zasendle eziyingozi kuya kubabeka emngciphekweni omkhulu wokujoliswa ngenxa yokuncipha kwabo kwaye bengoyikisi kakhulu.
Ungajonga ingcebiso epheleleyo kunye nophando ngokuchofoza apha.
Ndwendwela iiMaldives ngoncedo lweWebhusayithi yokuGonya
Iinqwelo-moya zase-Ethiopia kunye neLiege Airport zandisa ...